Bhala i-pendrive ye-USB kwiWindows kunye nokusetyenziswa simahla | Iindaba zeGajethi
Iindlela ezi-5 zokubethela isiphephelo sethu se-USB kwiWindows
Namhlanje abantu abaninzi banokuphatha i-USB flash drive epokothweni, enokuba nayo ubukhulu obukhulu kakhulu kunye nomthamo omkhulu kakhulu, uphawu oluye lwamkelwa iminyaka embalwa linani elahlukileyo labavelisi.
Ukuba ulwazi olugcinwe kule flash drive lubaluleke kakhulu, mhlawumbi kuya kufuneka ucinge ukuyikhusela ngolunye uhlobo lokhuselo olongezelelekileyo; Uninzi lweenkqubo ezisebenzayo zeWindows zinomsebenzi wemveli onokukuncedaifrar kule pendrive ye-USB, Nangona, ngelishwa, iinguqulelo ezithile zingaphumeleli ukuxhasa eli nqaku kunye netekhnoloji, into esiza kuthetha ngayo ngezantsi kunye nengcebiso malunga neendlela ezintlanu onokuzisebenzisa, ukuze ukwazi ukubethela isixhobo sakho.
1 Isixhobo sendalo seWindows ukubethela i-USB flash drive
3 I-Rohos Mini Drayivu
4 Ifayile ikhuselekile Simahla
5 Ukhuseleko lwe Flash Flash
Isixhobo sendalo seWindows ukubethela i-USB flash drive
Njengoko besitshilo ngasentla, kukho isixhobo sendalo esicetywayo nguMicrosoft kwiinguqulelo zeWindows ezibonwe ukubheka phambili, ezokukunceda ukuba ubethele i-pendrive ye-USB ngaphandle kwengxaki enkulu okanye ubunzima. Konke okufuneka ukwenze kukuvula ifayile ekuphononongayo kwiWindows kwaye uzame ukufumana i-drive ye-USB pendrive, ukuyikhetha kamva ngeqhosha lasekunene le mouse. sebenzisa lo msebenzi kwimenyu yokuma, ukufumana into efana kakhulu nokubanjwa esiza kubeka emazantsi.
Nangona kunjalo, abasebenzisi beWindows XP abanalo ithamsanqa elifanayo, kuba abayi kuba nethuba lokufihla ipendrive yabo ye-USB; into abanokuyenza funda nayiphi na kubo ngesixhobo Oko kucetyiswe nguMicrosoft kwaye unakho khuphela kule khonkco.
Ukuba awufuni ukusebenzisa isixhobo sendabuko seMicrosoft ungazama ukusebenzisa «I-DiskCryptor«, Nguwuphi umthombo ovulekileyo kwaye ikuvumela ukuba ube nokhetho olongezelelekileyo.
Umzekelo, ukongeza kwinqanaba le-AES, i-Serpent kunye ne-Twofish encryption onokuyikhetha ngesi sixhobo, umsebenzisi naye ungathatha isigqibo sokubethela i-CD-ROM, iDisk disc kwaye ke, i-pendrive ye-USB; Isixhobo sifuna ukuqala kwakhona kwenkqubo yokusebenza kwaye nje ukuba ukubethela kwenziwe, kuya kuthatha ixesha kuba inkqubo iya kwenziwa kwisixhobo sonke; Uluhlu lokuhambelana ukusuka kwiWindows 2000 ukuya kwiWindows 8.1 ngokuxhomekeke kumbhekisi.
I-Rohos Mini Drayivu
Ngale ndlela, Kuya kufuneka umsebenzisi akhethe phakathi kwezi ndlela zimbini ukubethela i-pendrive ye-USB, into ekufuneka yenziwe ngokuxhomekeke kwinqanaba lamava abanalo kolu hlobo lomsebenzi.
Inketho yokuqala yenza iifayile zeekhonteyina ngaphakathi kwi-USB drive enye, ngelixa enye inkqubo iphakamisa ukwenziwa ulwahlulo oluza kusebenza njengesikhongozeli, efanayo leyo ayizukubonakala ngamehlo angaqhelekanga. Uncedo lulungile, kuba imowudi yokuqala inokuphononongwa ngumsebenzisi oqhelekileyo kunye nomhloli wefayile, kwaye ke zisuse ezo fayile kuba zibonakala.
Ifayile ikhuselekile Simahla
Isisa sesi sixhobo sibizwa ngokuba » Ifayile ikhuselekile Simahla»Inemiqathango, kuba kwinkqubo yofakelo izikrini ezimbalwa ziya kuvela zibonisa umsebenzisi ukuba afake izixhobo ezongezelelweyo, ezithathwa njenge «AdWare»; Ukuba uthe wadibana nabo, kuya kufuneka unqabe ukufakelwa kwabo ukunqanda ukuzicima kamva.
Uncedo lokusebenzisa enye into kukuba umsebenzisi uya kuba nakho ukubethela kuphela into abayifunayo, oku kuthetha ukuba ungakhetha kuphela iifolda ezithile ebekwe kwintonga ye-USB, ukuyifihla ngokukhawuleza.
Ukhuseleko lwe Flash Flash
Phantse iyafana nezinye iindlela ezichazwe apha ngasentla, «Ukhuseleko lwe Flash Flash»Ikwadala isikhongozeli esincinci esiza kusetyenziswa ukubethela intonga ye-USB. Isebenza kwisithuba esincinci ngaphakathi kule yunithi, engagqithiyo kwi-5 MB.
Xa i-pendrive ye-USB ifakiwe kwizibuko lekhompyuter yakho, iifayile ezikwesi sikhongozisi zisebenza kwangoko, zisenza umxholo wazo, ayifikeleleki ukuba awunalo igama eligqithisiweyo lokuvula. Ewe, olu khetho lokugqibela lunokuba neengxaki ezithile ukuba umsebenzisi onamava uvula i "Windows Disk Manager" ukubona isahlulelo kwaye uyicime ngonqakrazo olunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iindlela ezi-5 zokubethela isiphephelo sethu se-USB kwiWindows
Ungayifumana njani kwakhona iNombolo yeNombolo yeWindows xa ingaqali?
Ungazikhupha njani iifreyimu zoopopayi be-Gif?